Miantso fiaraha-mientana ny Kardinaly RAÏ any Liban
Miha mahazo vahana any LIBAN ankehitriny ny krizy arat-toekarena sy ara-politika.
Manahy kolikoly amin'ny ady amin'ny covid-19 ny OSCE
Manahy amin’ny mety hisian’ny resaka kolikoly ao anatin’ny ady amin’ny coronavirus ny eo anivon’ny Fiketrahana Masina.
Alahadin'ny Vatana aman-dRà Masin'i Kristy
Tsy afaka nanatanteraka ny fankalazana ny Alahadin’ny Vatana aman-dRà Masin’i Kristy tamina paroasy iray amin’ny diosezy iadidiny ao Rome i Papa François, omaly, fa nijanona tao amin’ny Bazilikan’i Masindahy Piera.
Papa François sy ny ady amin'ny fampiasana ankizy
Marihina isaky ny 12 jona ny andro erantany hiadiana amn'ny fampiasana ankizy. Miantso ny tompon'andraiki-panjakana i Papa François mba hitady vahaolana handresena izany.